मेलम्ची विपद् : आश्वासन आयो, सहयोग आएन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मेलम्ची विपद् : आश्वासन आयो, सहयोग आएन
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने, बेलिब्रिज राख्ने र कटान रोक्न तारजाली उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए
असार २५, २०७८ ऋषिराम पौड्याल
मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ११ गते बालुवाटारबाटै घोषणा गरे– बाढीपहिराले क्षति भएको हेलम्बु–मेलम्ची र पाँचपोखरीमा उद्धार/पुनःस्थापनामा कमी हुँदैन । असार १ गतेको बाढीपहिरोबाट भएको क्षति र उद्धारको सम्बन्धमा पार्टी कार्यकर्ताले हस्तान्तरण गरेका ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले बाढीपीडितलाई तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने, सडक सञ्जाल जोड्न बेलिब्रिज राख्ने र खेतीयोग्य जमिनको कटान रोक्न तारजाली उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । तर, उनको आश्वासन कार्यान्वयन भएको छैन ।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा तीन साताअघिको बाढीले पुरिएका सामान निकाल्दै स्थानीय । तस्बिर : ऋषिराम/कान्तिपुर
प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो र स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ हेलिकप्टरमै घटनास्थल आएर अरू आश्वासन दिएर फर्किए । तामाङले बाढीग्रस्त क्षेत्रका लागि बजेटको अभाव नहुने आश्वासन दिएको सम्झन्छन्, स्थानीय बासिन्दा । तामाङ बाढीग्रस्त क्षेत्रबाट निर्वाचित निवर्तमान सांसद हुन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मले आश्वासन दिएको तीन साता बिते पनि पीडित भने दाता र स्थानीय तहकै भरमा छन् । बितेका वर्षमा जुरे, लिदी र जम्बु पहिरोमा जस्तै योजनाबिनाका आश्वासनकै भर पर्नुपर्ने त होइन भन्ने चिन्ता पीडितहरूमा छ । कतिपय बाढीपीडित भूकम्पबाट विस्थापित भएर बजार छेउमा आएर बसेका थिए । उनीहरूको घर भत्केपछि फेरि पीडा थपिएको छ । ‘भूकम्पपीडितको नाममा पैसा ल्याएर बनाएको घरको नामोनिसान मेटिएको छ,’ हेलम्बु बोल्देका ग्याल्जन शेर्पाले भने, ‘भूकम्पको अन्तिम किस्ता नलिँदै घर बगरमा बिलायो ।’
हेलम्बुको चनौटे बजार । बजार मेलम्ची खोलाभन्दा निकै तल थियो तर बाढीले बजारसम्मै ढुंगामाटो थुपारेको छ । बजारमा कुनै पनि बेला खोला पस्न सक्ने भएको छ । तस्बिर : ऋषिराम पौड्याल/कान्तिपुर
बाढीपहिरो गएका बेला आकाशमा हेलिकप्टर उडाउनेको प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गर्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद र नेताहरू कोही न कोही हेलिकप्टरमा घटनास्थल पुगेकै हुन्छन् । राहत प्याकेजदेखि पुनर्वाससम्मका योजना सुनाउने गरिन्छ । हेलम्बु–मेलम्ची बाढीपहिरो पीडितका नाममा पनि हेलिकप्टर उडाउँदै विगतमा जस्तै आश्वासन दिए पनि संघीय/प्रदेश सरकारको उपस्थिति र सहयोगको अनुभूति पीडितले गर्न पाएका छैनन् ।
स्थानीय प्रतिनिधि रुष्ट
पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मन्त्रीलाई मात्र संघीय सरकार बुझ्नु गलत भएको बताए । सेना, प्रहरी संघीय सरकारको अंग भएकाले तत्कालको व्यवस्थापन संघीय सरकारबाटै मिलाएको उनको दाबी छ । ‘स्थानीय तहले आफूलाई सरकार हो भन्ने सम्झनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर समस्या हल गर्छौं । तत्काल अस्थायी र सुक्खायाममा स्थायी रूपमा आवासको व्यवस्था मिलाउने योजना छ ।’
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले भने उपलब्ध भएसम्मको राहत सामग्री वितरण गरेको बताउँछन् । विस्थापितको अन्तिम सूची प्राप्त भएकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकणमार्फत छिट्टै रकम उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मेलम्ची नगरपालिकामा १ सय ८७, हेलम्बुमा ८२, पाँचपोखरीमा ८०, सुनकोसीमा ८ र लिशंखु ठूलोपाखर गाउँपालिकामा ७ घर विस्थापित भएका छन् । पीडितको अस्थायी बसोबासका लागि प्रतिपरिवार २५ र ५० हजार वितरणको तयारी गरिएको छ । हाल सेनाको हेलिकप्टरले हेलम्बुको मेलम्चीघ्याङसहित विकट क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गरिरहेको छ । टेन्टसहित कतिपय राहत सामग्री उपलब्ध गराएर पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा राखेको प्रजिअ पोखरेलले बताए ।
बाढीपहिरोपछिको हेलम्बु-मेलम्ची : ‘ऊ त्यहीँ मुल्कोमै थियो मेरो घर’
आश्वासन बाँडेर पीडित झुक्याउने काम मात्र गरेको भन्दै प्रदेश सरकारप्रति स्थानीय प्रतिनिधि रुष्ट छन् । ‘हामीलाई त अहिलेसम्म केही दिएको छैन,’ उनीहरू भन्छन् । घटनास्थल आएर आश्वासन दिइए पनि योजना र रकम नपठाएको उनीहरूले बताए । वाग्मती प्रदेशले दिने भनेको एक करोड रुपैयाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेशले विपद् समितिको निर्णयअनुसार खर्च गर्ने गरी थप ५० लाख जिल्ला जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनलाई पठाएको छ । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रूपेश महतका अनुसार उक्त रकम हेलम्बु, मेलम्ची र पाँचपोखरीलाई तोकिएको छैन । ‘विपद् समितिले जहाँ निर्णय गर्छ, हामी त्यहीं खर्च गर्छौं,’ उनले भने ।
बाढीले अस्तव्यस्त भएको मेलम्ची बजारबाट देखिने इन्द्रावती । बाढीले भत्काएर बगरमा ल्याएको मेलम्ची पुलको संरचना । तस्बिरमा देखिएको बालुवाले पुरेको भागमा धान खेत र मेलम्ची नगरपालिकाले बनाउँदै गरेको पार्क थियो । तस्बिर : ऋषिराम पौड्याल/कान्तिपुर
मेलम्ची आएर मुख्यमन्त्री पौडेलले रकम पठाउने आश्वासन दिएका थिए । प्रदेशले उक्त रकम जिल्लातिर पठाएको मेलम्चीका मेयर डम्बर अर्यालको भनाइ छ । हेलम्बु भेगमा बाढीले सबैभन्दा बढी विनाश गरेको छ । ‘खोइ, मैले त संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोग देखेको छैन,’ हेलम्बुका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पा भन्छन्, ‘सामान ओसारपसारमा सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेको बाहेक संरचनाको संरक्षण र पीडितको व्यवस्थापनका लागि दाताहरूकै सहयोग छ ।’ संघ र प्रदेशबाट अहिलेसम्म सहयोग नभएर आश्वासन मात्रै पाएको उनले बताए । हेलम्बुको करिब १२ किमि क्षेत्र पहिरोबाट प्रभावित छ भने आउजाउ गर्ने पुल र सडकसमेत छैन । सरकारले दिने भनेको तारजालीबारे आफू अनभिज्ञ रहेको शेर्पाले बताए ।
बाढीले क्षति गरेको पाँचपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामा सहयोग त के, संघ र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले मुखसमेत नदेखाएको बताउँछन् । उक्त गाउँपालिकाका बस्तीलाई इन्द्रावतीमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । पुल बगाएको छ भने धानखेत कटानमा परेका छन् । ‘सडक सञ्चालनका लागि हामी आफैंले पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारको भर पर्न छाडेको छु ।’ पाँचपोखरीमा ७० धुरी विस्थापित छन् । मेलम्चीबाट करिब ३५ किमि टाढा लेकाली बस्ती याङ्ग्री र लार्केमा सहज रूपमा जान सक्ने अवस्था छैन ।
बालुवा खोतल्दै पीडित
बाढीबाट विस्थापितहरू आफ्नो सम्पत्ति खोज्न अहिले दिनैपिच्छे मेलम्चीको बगरमा भेला हुन थालेका छन् । उनीहरू बिहानैदेखि कोदालो, साबेल र खन्ती बोकेर बालुवाले पुरेको सरसामान झिक्ने प्रयासमा हुन्छन् । उनीहरूले नगरपालिकालाई बालुवा पन्छाउन माग गरिरहेका छन् ।
पानी घटेर घरमुनिबाट मेलम्ची कुद्न थालेपछि फेरि हुने क्षति रोकथामका लागि बगरमा डोजर कुदाइएको छ । मेलम्ची बगरमै भविष्य खोजिरहेकाहरूले आफ्नो बासस्थान बचाउन माग गरे । ‘जीवनको सबै सम्पत्ति बालुवामा मिसियो,’ बगर उधिनिरहेका तासी लामाले भने, ‘बालुवा पन्छाउन पाए केही भेटिन्थ्यो कि ।’ तासीजस्तै हराएको सुन भेटिने आसमा छन्, रामबहादुर सुनार । उनी आफ्नो सम्पत्तिको खोजीमा बगरमा घुमिरहन्छन् । मेलम्चीवासी सकभर आफू बसेको स्थान छाड्न नपरे हुन्थ्यो भन्नेमा छन् । उनीहरू बालुवा हटाएर आफ्नै घरमा बस्न चाहन्छन् । स्थानीय सरोकार समितिका अगुवा सागर श्रेष्ठले मेलम्चीवासीले सधैंका लागि आफ्नो ठाउँ छाड्ने मनस्थिति नबनाएको बताए । बचेका घरलाई सुरक्षा दिन उनले माग गरे । मेयर अर्यालले खोला बढ्ने र घट्ने क्रम नरोकिएकाले फेरि खतराको सम्भावना रहेको बताए । उनका अनुसार बजार बचाउन नदीमा ७ वटा मेसिन लगाइएको छ । बाढीमा मेलम्चीका ७० भन्दा बढी घर बालुवाले पुरिएका छन् ।
आफ्नो स्रोतसाधनले मात्र धान्न कठिन हुने नगरपालिकाको भनाइ छ । दैनिक लाखौं रुपैयाँको तेल मात्र खर्च हुने गरेको विवरण सुनाउँदै अर्याल भन्छन्, ‘तत्काल र दीर्घकालीन योजनाबिना काम गर्दा पैसा मात्र खर्च हुने अवस्था आउन सक्छ ।’ नगरपालिकाले स्थापना गरेको उद्धार तथा पुनःस्थापना कोषमा ४ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । काठमाडौं महानरपालिकाले मेलम्चीलाई दुई करोड, हेलम्बु र पाँचपोखरीलाई ५०–५० लाख उपलब्ध गराएको छ । अन्य स्थानीय तहले पनि उक्त कोषमा रकम जम्मा गरिरहेका छन् ।
प्रकाशित : असार २५, २०७८ ०९:१९
ठूला–ठूला ढुंगा र माटोले पुरिएर खोला किनार बस्तीकै उचाइमा आएको छ ।
असार २४, २०७८ ऋषिराम पौड्याल
मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक — रोजगारीको खोजीमा रामेछापबाट आएर १७ वर्षसम्म सुखदुःखको कर्मथलो बनाएको मेलम्ची छाड्न बुद्धिप्रसाद गौतमको मन पटक्कै मानेन । मेलम्चीमै जीवन बिताउने मनसायले उनले चार वर्षअघि पुर्ख्यौली थलो बेचबिखन गरे । बैंकको ऋण थपथाप गरेर ४५ लाखमा किनेको उनको घर भएको ठाउँमा अहिले इन्द्रावती नदीको मुल्को दौडिरहेको छ ।
आफ्नो घर त्यहीँ इन्द्रावती खोला बगेको ठाउँमा थियो भन्ने देखाउँदै बुद्धिप्रसाद गौतम । बेकरी चलाएका उनको बाढीले सबै सम्पत्ति बगाएको छ । तस्बिर : ऋषिराम पौड्याल/कान्तिपुर
‘उ त्यहीँ थियो मेरो घर,’ गौतम सान्त्वना दिन आउने आफन्तलाई इन्द्रावतीतर्फ औंल्याउँदै भन्छन्, ‘जीवनभरको पसिना छिनभरमै बिलायो एकैछिनमा सुकुम्बासी भइयो ।’
चार पुस्तादेखि मेलम्ची पुरानो बजारमा बस्दै आएका श्यामकृष्ण श्रेष्ठ आफ्नो पुरिएको तीनतले घर वरिपरि फन्को मारेर बेलाबेलामा झोक्रिन्छन् । बाबुआमाले धेरै दुःख पाएको सुनेका श्यामकृष्णले भने वर्षौंको मिहिनेतबाट पक्की घर बनाएका थिए । तर उनी नयाँ घरमा एक वर्ष पनि बस्न पाएनन् । पस्केको भात खानै नपाई भागाभाग गरेर बाँचेको बताउने श्रेष्ठको परिवारसँग अहिले आङ ढाक्ने एकसरो लुगाबाहेक केही छैन ।
हेलम्बु हल्देका ग्याल्जेन लामाले बाढीको पानी घुँडासम्म आउँदाआउँदै दौडेर ज्यान जोगाए । तर उनी बस्दै आएको घरबारी छिनभरमै मेलम्ची खोलामा बिलायो । ‘हामी बुढाबुढीलाई भगवान्ले बचाएजस्तो लाग्छ,’ लामा भन्छन्, ‘एकछिन अघि भेटेको मान्छे सबै बगरमा मिसिए ।’ बाढीले बगाएर उनको घर आसपासका ५ जना बेपत्ता छन् ।
गत असार १ गतेको बाढीपछि मेलम्चीदेखि हेलम्बुको तिम्बुसम्म झन्डै १४ किलोमिटर क्षेत्रमा बुद्धिप्रसाद, श्यामकृष्ण र ग्याल्जेन जस्ता सयौंसँग पीडा र रोदनका कथा अनगिन्ती छन् । मेलम्चीका रामकाजी श्रेष्ठका पाँच भाइ छन् । उनीहरूको सम्पत्ति एउटा घर मात्रै थियो । त्यसलाई पनि बाढीले छोप्यो । रामकृष्णको परिवारको जस्तै कथा–व्यथा अहिले हेलम्बु र मेलम्चीका अधिकांशको छ । कल्पनै नगरेको बाढीले मेलम्ची–हेलम्बु करिडोरका बासिन्दा अहिले फेरि के होला भन्ने त्रासमा छन् । लामा भन्छन्, ‘यस्तो त बाढी होइन, हावा आएजस्तो भयो ।’ बाढी आउनु केही समयअघि जमिन हल्लिएको र हावा चलेको उनले बताए । बाढीको उद्गमस्थलको अवस्था पत्ता पाउन नसक्दा तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बढी त्रासमा छन् ।
बाढीमा परेर हराइरहेका हेलम्बु गाउँपालिकाका एक जनाको मात्र शव फेला परेको छ भने १५ जना अझै बेपत्ता छन् । मेलम्ची खानेपानीका ८ कर्मचारी तथा कामदार हराएकामा दुई जनाको मात्र शव भेटिएको छ । मेलम्ची मुहान क्षेत्र हेलम्बुका विस्थापित १ सय ७ परिवारले टेन्टमा रात बिताइरहेका छन् । मेलम्चीका डेढ सय परिवार विस्थापित भएका छन् । बजारनजिकै बसेर व्यवसाय चलाउन गाउँको खेतीबारी बेचेर बेंसी झरेकाहरू सुकुम्बासी भएका छन् ।घरबारविहीन मात्र भएका छैनन् उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको नामोनिसाना छैन । मेलम्चीका कतिपय घर बगाएको छ । केही घर बालुवामुनि दबिएका छन् । मेलम्ची खोला किनारको मेलम्ची बजार, फट्टे, तालामाराङ, ग्याल्थुम, चनौटे, गणेशेबगर, किउलका हजारौं रोपनी हरिया फाँट बगरजस्ता देखिन्छन् । खोला किनारका सरकारी भवन, विद्यालय, सडक, पुल र सार्वजनिकस्थल बाढीले बगाएको छ । एक बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जाने गोरेटोसमेत छैन । घरबार गुमाएकाहरूको एउटै प्रश्न छ, ‘अब बाँच्ने कसरी ? मेलम्ची बजारका डेढ सय परिवार विस्थापित भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
भूकम्पपछि जिल्लामै चहलपहलको बजारका रूपमा विकास हुँदै गएको मेलम्ची बजारवासी अहिले त्रसित छन् । माथिबाट बाढी आएको खबर समयमै पाएकाले मेलम्ची बजारवासी कसैले पनि ज्यान गुमाउनुपरेन । उनीहरूले भागाभाग गरेर ज्यान जोगाए । तर जीवनभर कमाएको सम्पत्ति भने एकैछिनमा पानीमा मिसिएको छ । बजार बगर जस्तो भयो । कतिपय साना व्यवसायी र मेलम्चीमा मात्र घर भएकाहरू सुकुम्बासी भए । अहिले खोलाको बहाव घट्दै गएको छ । बजारको ठाउँठाउँमा घरायसी सामान छरपष्ट देखिन थालेका छन् ।
पीडितहरू बालुवाले छोपेका आफ्ना घरका झ्यालका प्वालहरूबाट चियाउँदै गरेको देखिन्छ । कोही सामानको खोजीमा बालुवाले पुरिएका घरका कोठाहरू खोतल्न थालेका छन् । तर सामान्य ढंगले बजारबाट माटो र बालुवा पन्छाउन सक्ने अवस्था छैन । मेलम्ची बजार पुनर्निर्माण तथा सरोकार समितिका अगुवा सागर श्रेष्ठका अनुसार सामान्य हिसाबले घरघरबाट बालुवा पन्छाउने अवस्था नभएपछि स्थानीयमा अन्योल छ । घडेरीसमेत गरी करिब २५ करोड खर्चेर निर्माण गरेको श्रेष्ठको होटलको दुई तला बालुवाले पूरै पुरेको छ । उनी भन्छन्, ‘बालुवा पन्छाउन सजिलो छैन ।’ उनी तत्काल बजार जोगाउने अभियानमा एक्स्काभेटर र डोजरको सहयोगमा खोलाको छेउछेउमा ढुंगा थुपार्ने काममा व्यस्त छन् ।
हेलम्बुको गणेशेडाँडा शिविरमा बसेका बाढीपीडित । विस्थापितमध्ये १२ परिवार एकै भान्सामा खाना खान्छन् । तस्बिर : ऋषिराम पौड्याल/कान्तिपुर
अब के होला ? यति ठूलो बाढी कुन ठाउँबाट आयो ? कसरी यस्तो रूप लियो ? फेरि पनि बाढी आउने हो कि ? यस्ता प्रश्नले मेलम्चीवासीलाई सताउने गरेको छ । मेलम्ची जोड्ने सडकमार्ग र झोलुंगे पुल बगाएपछि बाहिरबाट आउजाउ गर्न समस्या भएको छ । गाउँबाट आउने यातायातका साधनको प्रवेश रोकिएको छ । पैदलका लागि पनि लामो समय लगाएर घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । नजिकैको गाउँ पनि दुर्गम जस्तै बनेको छ । यसले मेलम्चीको चहलपहल घटाएको छ ।
त्यसैले बजारवासी कोही बालुवाले पुरेको घर खोतल्दै छन् भने कोही अब के गर्ने भन्दै अन्योलमा देखिन्छन् । भाडाको घरमा होटल व्यवसाय गर्दै आएका तासी तामाङ बालुवाले पुरेको सामान झिक्दै भन्छन्, ‘कतै केही काम लाग्ने सामान भेटिन्छ कि ?’ उनी सहयोगीसहित दिनैपिच्छे घरलाई पुरेको बालुवा खोतलिरहेका छन् । तासी भाडामा बसेको घरको सरसामान खोज्न व्यस्त छन् । अहिले बजारवासी धेरै आफ्नो घर जोगाउन एक्स्काभेटर लगाएर खोलालाई टाढा लैजाने कोसिस गरिरहेका छन् । मेलम्ची नगरपालिका र स्थानीयले एक्स्काभेटरको सहारामा बजार जोगाउन खोलाको किनारमा ढुंगा हालिरहेका छन् । तर बाढी रोकिन्छ कि फेरि आउँछ ? त्रास त बाँकी नै छ ।
झन्डै एक किमि क्षेत्रमा फैलिएको मेलम्ची बजार क्षेत्रका डेढ सय घर बालुवाले पुरिएका छन् । बजारको दक्षिणतर्फको नयाँबस्ती र उत्तर एवं पूर्वतर्फको पुरानो बजारलाई माटो/बालुवाले पुरेको छ । तीन तलासम्म पुरिएका घरहरू जोगाउने कोसिस भइरहेको छ । तर खोलाको सतह निकै बढेकाले वर्षात्को पानी माथिल्लो भागमा पस्ने जोखिम अझै छ । बजारको बीच भाग सुरक्षित छ भने पूर्वतर्फको खेतीयोग्य जमिनलाई इन्द्रावतीले कटान गरेर बालुवाको ढिस्को बनाएको छ । नदीको सतह १२ मिटरसम्म बढेको प्रारम्भिक अनुमान छ । बाढीअघि मेलम्ची–इन्द्रावतीभन्दा बजार निकै उचाइमा थियो । अहिले खोलाको सतह र बजार एउटै उचाइमा स्थिर जस्तै भएको छ । बजारको मध्यभागमा मेलम्ची खोलामा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बनाउन लगाएको झोलुंगे पुलको जगमात्रै बाँकी छ । झोलुंगे पुलबाट तल्लो भागमा रहेको पुल बगाएको छ ।
मेलम्ची बजारदेखि करिब १४ किमि टाढा हेलम्बुको किउलसम्मको खोला किनारको भाग झट्ट हेर्दा मधेसको समतल भूमि जस्तै देखिन्छ । ठूला–ठूला ढुंगा र माटोले पुरिएको खोला किनार बस्ती र खेतीयोग्य जमिनकै उचाइमा आएको छ । ठाउँठाउँमा घर, गोठ र पाटीपौवाहरू खोलामा ढलेको अवस्थामा देखिन्छन् ।
मेलम्ची बजारका घरहरू बालुवा र माटोले पुरिएका छन् । खोलाको सतह र बजारका घरको दोस्रो तलासम्म एउटै उचाइमा देखिन्छन् । बजारबाट मेलम्ची मुहानतर्फको प्रवेशमार्ग बाढीले बगाएपछि अस्थायी प्रकृतिको सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बजारको अन्तिम बिन्दुबाट उक्त सडक खण्डको तल्लो भाग अहिले पनि मेलम्ची खोलाले कटान गरिरहेको छ । बाढीअघि खेती लगाएको मेलम्चीको फराकिलो फाँटमा माटो र ढुंगाको थुप्रो देखिन्छ । मेलम्चीबाट तालामाराङसम्म ६ किमि खोलाको किनार फराकिलो बगरमा परिणत भएको छ । मेलम्ची एफएम र होटलहरूको भवनलाई बीचमा पारेर मेलम्ची खोला बगिरहेको छ । मेलम्ची बजारबाट करिब एक किमि टाढा फट्टेस्थित पक्की पुल भाँचिएको छ भने खोला किनारका घरहरू खोलामा ढलेको अवस्थामा देखिन्छन् ।
पक्की पुल भाँचिएपछि पाल्चोक, दुवाचौरलगायतका स्थानमा जाने यातायात पूर्णरूपमा बन्द भएको छ । तालामाराङमा तेर्से माविको भवनको केही भागमा क्षति पुगेको छ । त्यसलाई स्थानीयको पहलमा खोलामा तारजाली लगाएर तत्कालका लागि जोगाइएको छ । मेलम्चीबाट करिब ८ किमि टाढा ग्याल्थुमस्थित बोर्डिङ स्कुलको पक्की भवन बाढीले बगाएको छ । धान खेतीका लागि प्रख्यात पाल्चोकलगायतका फाँट बगरमा परिणत भएका छन् ।
हेलम्बुको किउलकी ७९ वर्षीया सान्नानी सापकोटा दाताले दिएका राहत सामग्री बोकेर घर जाँदै ।तस्बिर : ऋषिराम पौड्याल/कान्तिपुर
मेलम्चीबाट करिब १३ किमि टाढा चनौटे बजारका घरहरूमा पनि बस्नै नहुने गरी क्षति पुगेको छ । केही घर खोलाले बगाएको छ । चनौटेमा रहेको रातो पुल हेलम्बु क्षेत्र आउजाउ गर्न निकै सहयोगी भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले निर्माण गरेको उक्त पुलको जग चट्टानमाथि भएकाले बाढीले बगाउन नसकेको हो । चनौटे बजारबाट हेलम्बुतर्फ जाने करिब एक किमि सडक छियाछिया छ । साविकको सडक छाडेर नयाँ रुटबाट गणेशेबगर झरेर किउल पुग्न सकिन्छ । किउल पुग्नुअघिको सबै भाग बगाएपछि बगरबाटै यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मेलम्चीबाट करिब १४ किमि प्रवेश मार्ग पार गरेपछि मेलम्ची मुहान जान सकिँदैन । बाढीअघि साँघुरो खोलाले दायाँबायाँ कट्टान गर्दै अघि बढेको देखिन्छ । गहिरो खोलाले थुपारेको ढुंगा, माटो देखेर स्थानीय अचम्म मान्छन् । हेलम्बु गणेशेबगरका नेमा स्याङ्बो तामाङका अनुसार खोलाको किनारबाट भारी बोकेर १० मिनेटभन्दा बढी समय लगाएर सडकमा निस्कनुपर्थ्यो । अहिले खोलो सडककै हाराहारीमा आएको छ । स्याङ्बो भन्छन्, ‘बाढी त बगेर होइन, उडेर आएजस्तो लाग्यो ।’ हेलम्बुको किउलदेखि खानेपानी मुहानसम्म करिब ४ किमि क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था छैन । गोरेटो बाटो पनि नभएकाले आउजाउ नै बन्द छ । उक्त क्षेत्रका खानेपानीले बनाएका हल्दे र तिम्बुको पक्की पुल बगाएको छ । मुहान क्षेत्रको अवस्था अझै यकिन हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०७:२५